'मेरो कुनै साथी छैन' - १० चीजहरू यदि तपाईंले यो लागी हो भने यो गर्न सक्नुहुन्छ - सम्बन्ध
'मेरो कुनै साथी छैन' - १० चीजहरू यदि तपाई लाग्नुहुन्छ भने यो तपाई हो
यदि तपाईंसँग कोही छैन भने तपाईं साँचो मित्र बोलाउन सक्नुहुन्छ एकाकीपन सहन गाह्रो हुन सक्छ, तर त्यहाँ केहि चीजहरू छन् जुन तपाईं अवस्थालाई सुधार गर्न सक्नुहुन्छ।
चाहे तपाई जस्तो लाग्छ तपाईको कुनै साथी छैन, वा स्कूल मा कलेज, वा काम मा कुनै साथी छैन, तपाईंले आफैलाई विश्वासयोग्य बनाउन दिनु हुँदैन कि तपाईं अप्ठ्यारो हुनुहुन्छ।
तपाईंले केवल सम्भावित कारणहरूको जाँच गर्नुपर्दछ किन तपाईंले अझै कसैसँग मित्रता गर्नु भएको छैन, र तिनीहरूलाई सम्बोधन गर्न खोज्नु भएको छ।
यहाँ तपाईंको जीवनमा अधिक साथीहरू पाउनको लागि १० अति प्रभावकारी सल्लाहहरू छन्।
नोट: यदि तपाई वास्तवमा एक बहिर्गमन र सामाजिक व्यक्ति हुनुहुन्छ, तर तपाईको व्यक्तिगत स्थिति परिवर्तन भएको छ र तपाईका वरिपरि साथीहरू हुन छाड्नुभएको छ - हुनसक्छ तपाई स्थान परिवर्तन गर्नुभयो, बच्चा जन्माउने काम छोड्नुभयो, भर्खरै रिटायर भएको वा अरू केहि - सल्लाहमा सल्लाह यो लेख अझै तपाइँसंग प्रासंगिक छ र बोर्ड मा लिन लायक।
१. जाँच गर्नुहोस् कि तपाईं नयाँ मित्रता रोकिदै हुनुहुन्न।
यदि तपाईं यो लेख पढ्दै हुनुहुन्छ भने, सम्भावनाहरू के तपाईं साथीहरूको अभाव हुनुहुन्छ र प्रायः एक्लो महसुस गर्नुहुन्छ। त्यसोभए यो सोध्नु अनौंठो लाग्न सक्छ कि तपाईं वास्तवमै नयाँ मित्रता बनाउनबाट रोकि रहनु भएको छ।
तपाईं ठीकै सोध्न सक्नुहुन्छ: 'मेरा कुनै साथीहरू छैनन्, त्यसोभए म किन आफ्नै तरिकाले नरकमा पुग्न सक्छु?'
ठिक छ, उत्तर यो हो कि तपाईंले यो महसुस गरिरहनु भएको छ कि तपाईंले यो गरिरहनु भएको छ।
दिमाग एक जटिल जनावर हो र हामीले गर्ने धेरै चीजहरू चेतना भन्दा तलको स्थानबाट आउँदछन्। हामी तिनीहरूलाई स्वचालित रूपमा गर्छौं, बिना सोचबिचार, र उनीहरूले कसरी हाम्रो जीवनलाई असर गरिरहेको छ भनेर विचार नगरी।
यी ब्यवहारहरू, जुन तपाईंबाट लुकेका हुन्छन् सामान्यतया केही समाधान नगरिएका व्यक्तिगत मुद्दाहरूको कारणले।
अचेतन दिमागमा केहि गहिरो चोट पुर्‍याउन तपाईंले ठूलो भावनात्मक वा शारीरिक आघात वा दुरुपयोगको अनुभव गर्नुपर्दैन।
तपाईंको विगतका महत्वहीन घटनाहरूले तपाईंको वर्तमान मानसिकतालाई असर गर्न सक्छ र तपाईंलाई मित्रतामा बाधा पुर्‍याउन सक्छ।
सायद तपाई यस्तो वातावरणमा हुर्काउनु भयो जसले स्वतन्त्रता र आत्म-संरक्षणलाई प्रोत्साहित गर्‍यो जसको अर्थ हो कि तपाई अरूलाई कुनै चीजको लागि भरोसा गर्न सक्नुहुन्न - मित्रता वा रमाईलो सहित।
हुनसक्छ तपाईलाई विगतमा मान्छेले निराश तुल्याएको छ र तपाईलाई हानी नै छ कि तपाईलाई त्यहि भावनाले चोट नपारून्। तपाईं धोका र निराशा डराउनुहुन्छ, त्यसैले तपाईं त्यस्तो वास्तविक जोखिमबाट बच्नको लागि व्यक्तिलाई बाहुको लम्बाइमा राख्नुहुन्छ।
के तपाईं अरूको मित्रताको लागि अयोग्य महसुस गर्नुहुन्छ किनकि तपाईं आफ्नो सुरुका वर्षहरूमा बदमाशी र उत्पीडनबाट ग्रस्त हुनुभयो?
यी केवल तीन उदाहरणहरू छन् कसरी तपाईं अर्थपूर्ण मित्रता बनाउनको लागि मानसिक अवरोधहरू राख्नुहुन्छ र किन तपाईंको कुनै साथी छैन।
तपाईले राख्नु भएको विश्वास र उनीहरूले पाउनु भएको विचारहरूले तपाईंलाई अन्य व्यक्तिहरूलाई साथी बनाउन गाह्रो बनाउन सक्छ। आफैलाई सोध्नुहोस् कि यदि यो तपाईंको जीवनमा त्यस्तो हुन सक्छ।
२. मानिसहरूलाई गलत सन्देश नदिनुहोस्।
व्यक्तिहरू नयाँ साथी बनाउन प्रायः खुला नै हुन्छन्, तर उनीहरूले महसुस गर्नु पर्छ कि अर्को व्यक्ति बन्न चाहन्छ उनीहरूको मित्र पनि।
तिनीहरूले प्रयास गर्न वा नगर्ने छनौट गर्नु अघि ती व्यक्तिसँग सम्बन्ध जोगाउने वा बुझाउने संकेतहरू पढेर स्थितिको मूल्यांकन गर्छन्।
त्यसोभए, तपाईंले आफैलाई सोध्नु आवश्यक छ कि तपाईं आफू वरपरकाहरूलाई गलत संकेतहरू दिँदै हुनुहुन्छ जो सम्भावित साथी हुन सक्छन।
तपाईं 'मेरो कुनै साथीहरू छैनन्' भन्न सक्नुहुन्छ, तर के तपाइँ सामाजिक घटनाहरूको निम्तोबाट टाढा रहनुहुन्छ? के तपाईंले विगतमा त्यसो गर्नुभयो? यदि हो भने, तपाईंले बुझ्नु पर्दछ कि मानिसहरूले चाँडै नै तपाईंलाई सोध्न छोड्नेछ यदि तपाईं तिनीहरूलाई अस्वीकार गर्नुहुन्छ भने।
तिनीहरूले केवल तपाइँ या त चासो छैन वा तपाईं गर्न राम्रो चीजहरू छ कि मान्नेछ।
त्यसोभए त्यहाँ तपाईंको शरीर भाषा र यसले अन्य व्यक्तिमा पार्न सक्ने प्रभाव छ।
यदि तपाइँ हतियारहरू पार गरेर बन्द गरीएको देखिन्छ र तल झर्नुहुन्छ भने, यसले व्यक्तिहरू तपाईंसँग आउने र कुरा गर्ने बारेमा आत्मविश्वासले भरिपूर्ण हुँदैन।
यदि तपाई व्यस्त हुनुहुन्न जस्तो देखिनुहुन्छ भने, तिनीहरू सामाजिक अजीब कुराकानी वा सम्भावित अस्वीकृति जोगिन स्पष्ट स्पष्ट हुनेछ, तिनीहरू पनि मानव प्राणी हुन्।
जब कसैले तपाईंसँग कुरा गर्छ, तपाईं कसरी प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ? व्यक्तिहरू जस्तै कुराकानीहरू स्वाभाविक रूपमा प्रवाह हुन्छन् र ती बाध्य महसुस गर्दैनन्।
यदि तपाईं दोहोर जवाफ र छलफल लामो समय मा कुनै प्रयास गर्न बेवास्ता गर्नुभयो, चुपचाप चाँडै उनलाई बिदाइ हुनेछ।
Social. सामाजिक सीप सिक्नुहोस् र तिनीहरूलाई प्राय: अभ्यास गर्नुहोस्।
एक पटक तपाईले नयाँ मित्रताको बाटोमा कसरी उभिरहनु भएको छ भनेर थाहा पाउनुभए पछि तपाईले भेट्टाउनु भएका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्नु पर्ने हुन्छ।
कुनै सीपको रूपमा, तपाइँले सामाजिकरणको आधारभूत कुराहरू सिक्नको लागि कदमहरू चाल्नुपर्दछ र त्यसमा अझ राम्रो हुनको लागि प्रत्येक दिन अभ्यास गर्नुहोस्।
तपाई जस्तो सानो सुरु गर्न सक्नुहुन्छ, दिनको एक पटक परिचित अनुहारलाई नमस्कार पनि भन्न सक्नुहुन्छ, तर अधिक पटक तपाईं प्रयास, छिटो तपाईं परिणामहरू देख्नुहुनेछ।
तपाईंले गतिविधिहरू छनौट गर्नुपर्दछ जुन विशेष क्षेत्रहरूलाई तपाईंले एक चरणमा हाइलाइट गर्नुभयो।
त्यसोभए यदि तपाईंको स्वतन्त्रताको कारण तपाईंको कुनै साथीहरू छैनन् भने तपाईंले सँधै सकेसम्म साना चीजहरूको सुरूवात गर्नुपर्नेछ र त्यहाँबाट निर्माणको लागि सहयोगको लागि प्रयास गर्नुपर्छ।
यदि तपाईं सामान्य रूपमा काम पछि द्रुत पेयको प्रस्ताव अस्वीकार गर्नुहुन्छ भने, किन तपाईले अर्को पटक ट्याग गर्न सक्नुहुनेछ भनेर सोध्नु भएन जब तपाईका सहकर्मीहरू पट्टीतिर लाग्छन्।
तपाईं जानु भन्दा पहिले केवल एक पेसको लागि रहनुपर्दछ, तर तपाईंले तिनीहरूलाई सामाजिक अवस्थामा यति राम्ररी चिन्नुहुनेछ कि तपाईं कहिले पनि कार्य वातावरणमा जानुहुन्छ।
यदि कुराकानीहरू तपाईंलाई सजिलैसँग आउँदैन भने सायद संकेतहरूको छोटो सूची कण्ठ पार्नुहोस् जुन तपाईं संवाद प्रयोगमा सुक्नुभयो भने प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
उनीहरूलाई जेनेरिक विषयहरू बनाउनुहोस् जस्तै कसैले सप्ताहन्तमा के गर्‍यो वा क्यालेन्डरमा अर्को छुट्टीको लागि तिनीहरूको योजनाहरू के छ।
यस किसिमको साधारण चीजले कुराकानीलाई लम्बाउन सक्दछ र तपाइँ र अर्को बिच बन्धनको पहिलो थ्रेडहरू निर्माण गर्न सक्दछ।
N. संख्या फरक पर्दैन।
जब तपाईसँग शाब्दिक रूपमा कुनै साथीहरू छैनन्, संख्या जुन तपाईले बनाउनु भएको भए केही फरक पर्दैन।एकल साथी कुनै भन्दा राम्रो छ।
त्यसोभए चिन्ता नलिनुहोस् धेरै मानिससँग धेरै पटक एकै पटक सम्पर्क बनाउने कोशिश को लागी एकै पटक तपाईको प्रयासलाई एक सानो संख्यामा केन्द्रित गर्दछ - सायद एक वा दुई मात्र - र त्यसपछि त्यहाँबाट बिस्तारै तपाईंको काम गर्नुहोस्।
यदि तपाईंले फेला पार्नुभयो कि साथीहरू बनाए पछि पनि तपाईं राख्न सक्नुहुन्न, सोध्नुहोस् कि तपाईं आफैंलाई त्यति पातलो पनी फैलाइरहनुभएको छ कि समय र ध्यान दिएर तपाईंले मानिसहरूलाई दिदै हुनुहुन्छ।
यो विशेष गरी महत्त्वपूर्ण छ जब तपाईं कसैसँग पहिलो पटक मित्र बनाउनुहुन्छ। नियमित सम्पर्क र जडान भनेको बलियो बन्धन हो।
Age. उमेर, जाति, वर्ग, र लि of्गका अवरोधहरू पछाडि हेर्नुहोस्।
कुनै साथीहरूको साथ वयस्कको रूपमा, यो सोच्न सजिलो हुन सक्छ कि तपाईं प्रायः उस्तै उमेर, सामाजिक पृष्ठभूमि, वा लि of्ग भएका व्यक्तिहरूसँग साथी बनाउन सक्नुहुनेछ, तर सत्य यो हो कि यी कुराहरू तपाईंको सोचाइ भन्दा कम फरक पर्दछ।
जब एक साथी तपाइँ संग झुट बोल्छ
के कुरा साझा हित, साझा मान, र संगत व्यक्तित्व हो।
त्यसोभए आफैलाई सीमित नगर्नुहोस् जब नयाँ साथीहरू खोजी गर्दै अवरोधहरू पार गर्छन् जसले मानिसहरूलाई अलग राख्छ र सम्भावित साथीहरूको सम्पूर्ण संसार पत्ता लगाउँदछ।
Friends. साथीहरू अनलाइन बनाउनुहोस्, तर तिनीहरूलाई आफ्नो साथी मात्र नबनाउनुहोस्।
'मेरा कुनै साथीहरू छैनन्' भन्ने सोचाइ अक्सर 'बिचारको अर्को सोचाइको साथ हुन्छ' र मलाई थाहा छैन उनीहरू कहाँ भेट्टाउने। '
तर त्यहाँ त्यहाँ धेरै अवसरहरू छन्। यी अर्को तीन पोइन्टहरूले तपाईंलाई व्यक्तिलाई भेट्ने र नयाँ साथीहरू बनाउने सब भन्दा साधारण तरिका दिन्छ।
लाखौं विविध फोरमहरू, फेसबुक समूहहरू, च्याट कोठा, वेबसाइटहरू, र अनलाइन सगाईको लागि अन्य स्थानहरूको साथ, यो डिजिटल माध्यम मार्फत समान विचारधारा भएका व्यक्तिहरू भेट्टाउन सजिलो हुन्छ।
यो कुनै पनि हिसाबले खराब चीज होइन, र यसले तपाईंलाई सुरक्षित सामाजिक वातावरणमा तपाईंको सामाजिक सीप अभ्यास गर्न मद्दत गर्न सक्छ, तर यस प्रकारको मित्रतामा धेरै भर पर्दैन।
Your. तपाईका आवेगलाई नयाँ साथीहरूका स्रोतहरूमा बदल्नुहोस्।
साझा रुचिहरू अक्सर बढ्दो सहयोगीको लागि राम्रो भवन ब्लकहरू हुन्छन्, त्यसोभए तपाईंले गरिरहनुभएको गतिविधिहरूलाई नलगाउनुहोस् र नयाँ साथीहरू बनाउने तरिकामा बदल्नुहोस्?
तपाईंको क्षेत्रका समान विचारधारा भएका व्यक्ति / समूहहरू फेला पार्न Meetup.com जस्ता सेवाहरू प्रयोग गर्नुहोस् र त्यसमा समावेश हुनुहोस् जुन तपाईंले सबै रमाइलो पाउनुहुन्छ।
यो टिप यति सरल छ कि यदि तपाईका साथीहरू आज छैनन् भने पनि तपाईसँग एक सामाजिक जीवन छ समय बिना नै।
Cross. क्रस-परिचय साथीहरू द्वारा एक सामाजिक सर्कल बनाउनुहोस्।
एकचोटि तपाईंले एक वा दुई साथीहरू बनाउनु भएपछि, तपाईं तिनीहरूसंग भएको बन्धनलाई एक अर्कामा परिचय गराउन मद्दत गर्न सक्नुहुनेछ।
यदि तिनीहरूले तपाईंको कम्पनीमा रमाए भने, त्यहाँ एक व्यावहारिक अवसर छ कि तिनीहरूले एक अर्काको मजा पनि लिनेछन्। यो विशेष गरी सही हो यदि तपाईं सबै रूचिहरू साझा गर्नुहुन्छ वा त्यस्तै स्वभावहरू छन्।
यो सफलतापूर्वक गर्नुहोस् र तपाईंले मित्रहरूको सर्कल सिर्जना गर्नुभयो जुन बढी लचिलो र सम्भवतः लामो समय सम्म रहनेछ।
Friend। मित्रताको लागि लक्ष्य राख्नुहोस् जुन गहिरो सम्बन्ध छ।
त्यहाँ मित्रताको बिभिन्न प्रकार छन् र एक कुञ्जी तरीका जुन उनीहरूमा भिन्न छ हालको आत्मीयताको स्तरमा छ।
सतही साथीहरु आउन सजिलो भन्दा पहिले आउँछ जहाँ तपाईं खोल्न सहज र आफ्नो कालो विचार साझा को लागी सहज छ।
यदि तपाईंसँग हाल कुनै साथी छैनन् भने, यो अधिक सतह-स्तर कनेक्शनको लागि छनौट गर्न लोभ्याउन सक्छ, जो कम जोखिम बोक्छ र फाराममा सजिलो / छिटो हुन्छ।
मित्रताहरू जुन अधिक महत्व राख्दछन्, ती ती मुट्ठीहरू हुन् जुन समयको परिक्षामा उभिन्छन् र तपाईंको जीवनलाई प्रमुख रूपमा बढाउँछन्।
त्यसोभए एक वा दुई साथीहरू बनाउनुहोला तपाईं घनिष्ठ मित्र बनाउनुहोस्।
१०. साथीहरू पछ्याउन नजाओ।
जे होस् तपाईका कुनै साथीहरू छैनन् र तपाई एक्लो महसुस गर्नुहोला, यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईले कसैलाई आफ्नो साथी बनाउन धेरै प्रयत्न गर्नु हुन्न यदि त्यहाँ कुनै वास्तविक सम्बन्ध छैन भने।
व्यक्तिलाई पछ्याउने र उनीहरूमा मित्रता जबरजस्ती गर्ने प्रयासले कहिल्यै काम गर्दैन।
यसैले तपाईले मानिसहरूलाई जहिले पनि समयको राम्रो मात्रा दिनुपर्दछ कि यदि हामीले भर्खरै भनेको कुराको गहिरो सम्बन्धको सम्भावना छ कि छैन भनेर जान्नुहोस्, कहिले यसलाई कल छोड्ने भनेर जान्नुहोस्।
यो डेटि like जस्तै हो यदि यसले गम्भीर सम्बन्ध जस्तो महसुस गर्दैन भने (यस अवस्थामा एक मित्रता) केही समय पछि कार्डमा छ, तपाईं बाटो छुट्याउँदा दोषी महसुस गर्नुपर्दैन।
अहिल्यै, तपाईंले यसलाई पढिरहनु भएको बेला, यस्तो लाग्न सक्छ जस्तो कि तपाईंको कुनै साँचो साथी छैन र कसैले तपाईंलाई मन पराउँदैन। केवल याद गर्नुहोस् कि यो यस तरिकाले हुनुपर्दैन।
तपाईंसँग नयाँ मित्रता फोर्ज गर्न र तपाईंले प्रियलाई समात्ने व्यक्तिको सामाजिक नेटवर्क सिर्जना गर्ने शक्ति छ।
साहसको ती बन्धन निर्माण गर्न यसले समय र अठोट लिन्छ, तर तपाइँसँग एक पटक, इनाम महान छ।
साथीहरू को अभाव तपाईंलाई तल ल्याउने? यसका बारे कसैसँग कुरा गर्न चाहानुहुन्छ? आज एक सल्लाहकारसँग कुरा गर्नुहोस् जसले तपाईंलाई राम्रो महसुस गर्न र नयाँ जडानहरू बनाउन मद्दत गर्दछ। केवल एक संग कनेक्ट गर्न को लागी यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
वयस्कको रूपमा कसरी साथीहरू बनाउने: V महत्वपूर्ण चरणहरू + B बिट्सको सल्लाहको
Close वैकल्पिक सामाजिक गतिविधिहरू जोसँग नजिकका साथीहरू छैनन्
तपाईंको मित्रतालाई पहिले भन्दा झनै नजिक बनाउने १० तरिकाहरू
Be व्यवहार जुन तपाईंको साथीहरूलाई टाढा पठाउँदैछ
'किन व्यक्तिहरू मलाई मन पराउँदैनन्?' - १ Th कुराहरु अहिल्यै गर्नबाट रोक्नको लागि
17 संकेतहरू जुन तपाईं एक विषाक्त व्यक्ति हुनुहुन्छ (कसरी जान्ने + कसरी रोक्ने)।
कसरी एक्लो खुशी रहन: बाँच्न र आफुबाट हुनेमा १० सल्लाहहरू
यदि तपाईं एक्लो हुनुहुन्छ भने, तपाईंले यी9लाभहरू एक हुनका लागि बुझ्नुहुनेछ
मलाई रोएको जस्तो लाग्छ तर सक्दिन
मान्छे टाढा जान्छ जब उनी प्रेममा पर्छन्
मेरो प्रेमी म संग समय बिताउँदैन
कसरी तपाइँको प्रेमी लाई विश्वास गरे पछि उसले झुट बोली
तपाइँको मंगेतरले चासो गुमाईरहेको संकेत गर्दछ
ट्रिपल एच बनाम स्कॉट स्टेनर
अर्को wwe ppv कहिले हुन्छ